Shina · Desambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Desambra, 2010
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Desambra, 2010
Fampandrosoana 14 Desambra 2010
Nitsidika an'i Sina ny Praiministra Britanika David Cameron tamin'ny volana lasa teo. Rehefa vitany ny lahateniny tao amin'ny Anjerimanontolon'i Peking dia nisy mpianatra nanontany azy hoe inona no azony notsoahina tamin'i Sina. Niteraka adihevitra mafana tamin'ireo mpitoraka bilaogy sy ny olona manam-pahaizana any Sina ny tantara. Ka inona marina ary izany ny tena dikan'ny teny hoe "Modely Sinoa"?
GV Mpisolovava 11 Desambra 2010